Notsiahivin'i Chris Jeriko ny lalao voalohany nifanaovany tamin'i The Undertaker - Wwe
Notsiahivin'i Chris Jeriko ny lalao voalohany nifanaovany tamin'i The Undertaker
Nandeha an-tongotra farany nankany amin'ny peratra i Undertaker rehefa toa namarana ny asany WWE tao amin'ny Survivor Series 2020. Nanomboka ny asany tamin'ny WWE ny Phenom tamin'ny taona 1990, ary efa feno ny tantarany ankehitriny.
Tsy mitomany aho, mitomany ianao ... misaotra ny fahatsiarovana 30 taona an'i Undertaker #FarewellTaker pic.twitter.com/mkaFA5pweU
- Wombat_Mätt @ (@Wombat_Matt) 23 Novambra 2020
Maro ny WWE Superstars no nanome voninahitra an'i The Undertaker manerana ny media sosialy, anisan'izany ireo kintana taloha. Chris Jeriko dia tonga tao amin'ny YouTube mba handefa fanomezam-boninahitra lava an'i The Undertaker, niarahaba azy nandritra ny 30 taona tao amin'ilay orinasa.
Nandeha lavitra i Jeriko ary nampatsiahy ny voalohany natrehany an'i The Undertaker.
Nilaza i Chris Jeriko fa ny Undertaker dia iray amin'ireo olona mampatahotra indrindra amin'ny fotoana rehetra
Chris Jeriko dia nidera an'i The Undertaker sy ny fandraisany anjara tamin'ny sehatry ny tolona. Nidera azy izy toy ny iray amin'ireo 'bandy faran'izay mahafinaritra' nihaona tamin'ny fiainany, mampitaha azy amin'ny The Fonz avy amin'ny Andro faly.
Ankoatr'izay, notsiahivin'i Jeriko ny fotoana voalohany niatrehany an'i Undertaker tao anaty peratra, izay ninoany fa tany Puerto Rico niaraka tamin'ny The Big Show. Hoy izy:
'Tsy misy toa ny eo amin'ny peratra rehefa tonga ilay Taco Bell bong. Ary tsapanao ny goosebumps rehefa manomboka ny taova ary mandeha eo ambanin'ny peratra izy. Iray amin'ireo mpampatahotra, mpanolo-tena ary mpanao an-tsehatra indrindra amin'ny fotoana rehetra. Tsapanao izany rehefa tafiditra ao anaty peratra i The Undertaker. Tsapanao izany! Toy ny herinaratra io. Tsy hahita zavatra toa izany intsony isika. '
Iray amin'ireo fidirana Undertaker tsara indrindra pic.twitter.com/1U8xJpzMbB
- WrestlinGifs (@WrestlinGifs) 23 martsa 2017
Ny fanomezam-boninahitra an'i Chris Jeriko an'i The Undertaker dia ohatra iray hafa amin'ny fanajana izay azon'ny Deadman avy amin'ireo mpiady namany nandritra ny taona maro. Mety ve ny tian'i Chris Jeriko holazaina fa tsy hisy hitovy amin'ny toetran'ny The Undertaker? Ny fotoana ihany no hiteny.
Raha mampiasa teny nalaina avy amin'ity lahatsoratra ity ianao dia azafady H / T Sportskeeda Wrestling
amin'ny fifandraisana fa manana fahatsapana ho an'ny olon-kafa
ny fomba hanakaikezana ny namanao
zavatra mavitrika hatao rehefa mankaleo
10 fomba tony rehefa tezitra